म्याद सकिएको Sberbank कार्डको बारेमा सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
तपाईंले कार्ड खोल्नुभएको शाखालाई सम्पर्क गर्नुहोस्, यदि यो समयावधि सकियो भने सम्भवतः नयाँ कार्ड शाखामा छन् र तपाईंलाई पर्खिरहेका छन् (कार्डहरू स्वत: समयावधि समाप्ति मितिमा पुनः जारी हुन्छ), ढिलाइ नगर्नुहोस्, नयाँ कार्डको शेल्फ लाइफ सीमित छ। कार्ड (प्लास्टिक) पैसा रसिद खातामा ओभरडे छैन, कार्ड खाता मान्य छ र यसलाई स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। नयाँ कार्ड पाउनुहोस् र तपाईं यसलाई पुरानो कार्डको जस्तै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
केवल कार्ड परिवर्तन गर्नुहोस्, र यस्तै शर्त Sberbank साथ - अनलाइन तपाईं अर्को कार्डमा पैसा हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ र सुरक्षित रूपमा फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ !! ! तपाईंको टर्मिनल थुक्नेछ
अनुरोध पछि, नयाँको लागि तपाईंको पुरानो कार्ड साटासाट गर्नुहोस्! पुरानो कार्डमा बाँकी पैसा हस्तान्तरण गर्न निर्देशनहरूको साथ .. नयाँमा! आफ्नो राहदानी नबिर्सनुहोस्। तपाईं सम्झौताको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ, के हरायो! तर यो अन्तिम उपाय हो !!!
तपाईंले कार्ड खोल्नुभएको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्। कार्ड बन्द छ, तर खाता खुला छ।
तपाईंको राहदानीको आधारमा पैसा फिर्ता लिन सकिन्छ, र कार्ड तपाईंको खातामा पुनः जारी गर्न सकिन्छ। केही बैंकहरूले स्वतः मूलको म्याद समाप्त भएपछि नयाँ कार्डहरू जारी गर्छन्।
मेरो सेवानिवृत्ति कार्ड अगस्तमा समाप्त हुन्छ, ठीक समयमा जब सबै व्यस्त हुनेछन्, म यसलाई उठाउन सक्छु, अक्टुबरमा भन्छु? तिनीहरूले भर्खरै भने कि बैंकमा कार्ड सीमित समयको लागि हो, तर कति?
22 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,269 प्रश्नहरू।